ပန်ဒိုရာ: မြို့ပြနိုင်ငံရဲ့ ဒီဇင်ဘာည ကို ခံစားခြင်း
မပန် ဒီနေ့တော့ သွားဖြစ်ပြီပေါ့ ကြို မပြောဘူး၊ အိပ်လေးကို ရှာပြီး လိုက်ချောင်း မလို့ဟာ၊
မမ .. ကလေးပြန်လာပြီ စီဘောက်ကြီးဘယ်ရောက်သွားတာလဲ .... တွေ့တော့ဘူး....
အကုန် ကြည့်သွားပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ :P
မပန်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ခံစားရင်း စင်ကာပူ အော့ချာ့ဒ် လမ်းမပေါ် ခဏရောက်သွားသလိုပဲ.. :)
ဒီဇင်ဘာည ခံစားနေတာလား မပန်၊ မကြာခင် ခရစ်စမတ် လာတော့မယ်နော်။ သိုးလေးနဲ့တော့ မဆိုင်ပေမဲ့ မပန်တို့ဆီမှာ တော်တော်စည်မယ်နော် အဲဒီအချိန်ဆို။ မပန်လည်း အမှတ်တရပုံလေးတွေ ရိုက်ပြီး တင်ပေးဦးနော်။
ဟင်း ဟင်း ဟင်း . . . . သိနေတယ်လေ။
သိနေတယ်နော် . . . မမပန်ဒိုရာ။
ပုံတွေလာကြည့်သွားတယ် ပန်ပန်ရေ… ။
ကိုရီးယားအစားအစာ ဓာတ်ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ကြည့်ရင်းနဲ့ ဗိုက်ထဲက ဂွီကနဲမြည်လာတယ်။
ကောင်မလေးနဲ့ ခြင်္သေ့နဲ့ ပါးစပ်ဟနေကြတဲ့ ပုံကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
ပန်ပန်တို့ကတော့ အနုပညာ သမားလို့ မပြောရဘူး … ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးက မြင်တတ်ပါပေ့ … ။
မကြီးပန်ရေ ကွန်နက်ရှင်ဒေါင်းနေလို့ အချိန်မှီမရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ သက်ရောက်မှုရှိဆုံး ပို့စ်မှာလည်းကွန့်မန့်ရေးခဲ့ပါတယ်ဗျ။ပျော်ရွှင်ပါစေ :)
လှလိုက်တာနော်...။ အရီးပန်ရေ..နှစ်ယောက်တွဲ လျှောက်နော်...။
ပန်ပန်ရေ.. ဆီပုံးရောင်းစားလိုက်ပြီလား.. ဆီပုံးမတွေ့ လို့ ဒီမှာရေးခဲ့ချင်ပါတယ်.. http://www.australiaburmanetwork.org/index.php?We, the undersigned, call on Australian Government to end misuse of Aussie taxpayers' money to fund training of police & intelligence person in burmar.. ဒါနဲ့ ပြောရအုန်းမယ် ပန်ပန်ဘလော့ရှာရင်း တခြားဘလော့ကို ရောက်သွားပြီး စာမှားထားခဲ့မိသေး
မမပန်ကဘယ်photo ထဲမှာပါတာလဲ ....????
မပန်... ခဏခဏ လည်ရလွန်းလို့ ခြေထောက်ညောင်းလှပြီ မပန်ရဲ့... ပြန်ရအောင်နော်.. :P အဟီး.. အလုပ်များနေလား... :)
ကျွန်တော် လမ်းလျှောက်သွားတယ် မပန် ..။
Marry Chris Must! Ohhh sorry ... •.¸¸.•♥´¨♥•.¸ ¸.•` Merry X'mas ♥•.¸ ¸.••.¸¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•! (haa haa just kidding Merry=Marry, Christmas= Chris Must )
အားလုံးကို နောက်ကျတဲ့ ခရစ်စမတ် နှုတ်ခွန်းဆက် နဲ့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။